Kenya waxaa markale oo mamnuucday hilibka laga keeno Koonfur Afrika iyadoo laga cabsi qabo faafitaanka cudurka listeria - Wardeeq 24 TV Kenya waxaa markale oo mamnuucday hilibka laga keeno Koonfur Afrika iyadoo laga cabsi qabo faafitaanka cudurka listeria Wardeeq 24 TV
Home Caafimaad-ka Kenya waxaa markale oo mamnuucday hilibka laga keeno Koonfur Afrika iyadoo laga...
Kenya waxaa markale oo mamnuucday hilibka laga keeno Koonfur Afrika iyadoo laga cabsi qabo faafitaanka cudurka listeria
Wasaarada Caafimaadka dalka Kenya ayaa Talaadadii ku dhawaaqday inay mamnuuceyso soo galinta iyo iibinta qaar ka mid ah wax soo saarka hilibka ee Koonfur Afrika ka dib markii uu dalkaasi ka dillaacay cudurka listeria oo laga qaado hilibka kaas oo dilay ugu yaraan 180 qof.
Kenya waa waddanka ugu horreeya ee bariga Afrika oo mamnuuca hilibka diyaarka ah ee ka yimaada Koonfurta Afrika oo ay ku jiraan polony – waa nooc maxali ah oo loo yaqaan ‘baloney sausage ‘ – hilibka doofaarka la jarjaray iyo sausage nooca loo yaqaan Frankfurter-style.
Wasaarada caafimaadka ayaa qoraal ay u dirtay saraakiisha caafimaadka”ayaa waxa ay ku sheegeen si loo hubiyo caafimaadka dadwaynaha waa la ilaaliyaa, iyo si taxadar leh waxaa laga doonayaa saraakiisha caafimaadka inay joojiyaan soo dejinta iyo iibinta hilibka diyaarka ee laga keeno Koonfurta Afrika islamarkaana dib loo soo celiya kuwa horeyba suuqa ugu jira.
Wadamada Mozambique, Namibia, Botswana, Zambia, Malawi, Swaziland iyo Zimbabwe ayaa sidoo kale hor istaagay soo dajinta cunada, oo ay ku jiraan waxyaabaha ay sameeyeen warshaddaha iyo shirkaddaha ay leedahay Tiger Brands – taas oo loo arkay inay tahay halka dhibaatada ay kasoo fircantay – iyo kuwa kale oo ay sameeyeen shirkada Rainbow Chickens.
Tan iyo Janaayo 2017, 948 qof oo ku nool Koonfur Afrika ayaa qaaday cudurka listeriosis – oo ah cudur keena bakteeriyada ka timaadda ciidda, biyaha, dhirta iyo saxarada xayawaanka kuwa oo sumayn kara cuntada cusub, gaar ahaan hilibka.
Ugu yaraan 180 qof ayaa u dhintey cudurkaan , sida lagu sheegay tirooyinka rasmiga ah ee dowlada.
Previous articleShiinaha oo xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay ee aadanaha ee hargabka H7N4.
Next articleMaxay aqoonyahannada Soomaaliyeed ka yiraahdeen is-mariwaaga doorashada?